उत्साह, उमंग र सद्भावको पर्व माघ - Pradesh Today
Homeविचारउत्साह, उमंग र सद्भावको पर्व माघ
उत्साह, उमंग र सद्भावको पर्व माघ
आजभोलि थारू गाउँघरमा ‘सखिए हो माघक पिली गुरी–गुरी जाँर सखिए हो’ भनेर गुनगुनाएको सानासाना केटाकेटीदेखि युवायुवती, बृद्धबृद्धा सबैको मुखबाट गुञ्जिएको धेरै नै सुनिन्छ ।
किन भने थारूहरूको महान चाड माघ अहिले सबैको घर–घरमा भित्रिसकेको छ, त्यसैले । थारू जातिमा यो पर्वलाई विशेषगरी पाँच दिनसम्म आफ्नै परम्पराअनुसार धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ ।
माघ आगमन हुनुपूर्व थारू महिलाहरू घर लिपपोत गरी सफासुग्घर पारेका हुन्छन् र माघ कसरी मनाउने भनेर पूर्वयोजना पनि बनाएका हुन्छन् । थारू जातिको महान चाड माघको विषयमा कुरा गर्दा थारू समुदायमा माघलाई एउटा पर्व मात्र नभई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
यसलाई ठाउँअनुसार माघ, माघे सक्रान्ति र खिचडी पनि भन्ने गरिन्छ । माघे सक्रान्तिदेखि सूर्य धनुबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने हुनाले यसलाई मकर सक्रान्ति पनि भनिएको हो भन्छन् थारू भाषाविद्हरू ।
नया वर्षको रूपमा थारूहरूको माघ
माघ पर्व थारू समुदायको चाडपर्व मात्रै नभएर नयाँ बर्षको रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा नयाँ नीति नियम निर्माण पनि गरिन्छ । गाउँको अगुवादेखि चौकीदारसम्म चुनिने,
वर्षभरिका लागि कसलाई के जिम्मेवारी दिने, घरको मूली को बन्ने ? लेनदेन घर सल्लाहलगायतका बारेमा छलफल हुने भएकोले यसलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।
जुन थारू समुदायमा मात्रै सीमित छ भने अन्य समुदायका व्यक्तिले पनि उत्तिकै साथ र सहयोग प्रदान गर्ने गर्दछन् र थारू समुदायका मान्छेहरूसँग रमाउने पनि गर्दछन् । यसले गर्दा एकअर्कामा सद्भाव कायम गर्न पनि सहज भएको छ ।
थारू समुदायमा धुमधामसँग मनाइने माघ पर्वको तयारी केही दिन पहिलेदेखि नै शुरू हुन्छ । माघ आउन केही दिन बाँकी रहदा जङ्गलमा पात टिप्न जाने, दाउरा ल्याउने, घरमा जाँडरक्सी बनाउने, माछा मार्ने ठाउँको छनौट गर्नेलगायतका काम गरिन्छ । माछा मार्नका लागि माघ अगावै कुलो, खोलानालामा चिनो राखिन्छ ।
यसलाई थारू भाषामा ‘भ्युँरा–डर्ना’ तथा ‘रखइना’ पनि भनिन्छ । भ्युँरा राखिएपछि त्यस ठाउँमा कसैले माछा मार्न पाउँदैनन् । जसले भ्युँरा राख्छ उसले मात्र भ्युँरा राखेको ठाउँमा पुस महिनाको अन्तिम दिन माछा मार्ने गर्दछन् । भने कुनै गाउँ ठाउँमा नदी, खोला, तालतलैयामा सामूहिकरूपमा माछा मार्ने चलन पनि छ,
जुन आ–आप्mनो गाउँको नीतिनियम अनुसार हुन्छ । त्यसैले हामीमा सद्भाव कायम गरेको छ र हामी सबै जातजाति एकआपसमा मिलेर बसेका छौं र एकअर्काको चाडपर्वहरूमा खुसी साटासाट गरी रमाउने पनि गर्छौँ र मनाउछौं पनि, त्यसैले थारू समुदायमा माघलाई नयाँ बर्षकै रूपमा मनाइन्छ ।
माघमा खाइने ढिक्रीको महत्व
माघमा चामलको पिठोबाट बनाइएको एक प्रकारको परिकार ‘ढिक्री’ बनाएर खाने प्रचलन छ । ढिक्री थारू समुदायमा हरेक पर्वमा फरक–फरक प्रकारका हुन्छन् ।
माघमा लामो ढिक्री हुन्छ । माघपछि समय लामो हुने भएकोले लामो ढिक्री बनाएको थारू समुदायका अगुवाहरूको तर्क रहेको छ ।
अर्को तर्कअनुसार माघमा लामो ढिक्री खाएपछि आयु लामो हुने धारणा पनि रहेको छ । ढिक्रीको परिकारहरूमा थारू समुदायको मौलिकता र पहिचान झल्किन्छ ।
यस्तै थारू समुदायमा पुस महिनाको अन्तिम दिन सुंगुर काट्ने गर्दछन् । जसलाई थारू भाषामा ‘सुवर मर्ना’ दिन भनिन्छ ।
थारू समुदायमा सुंगुरको मासु विशेष रूपमा लिइने भएकाले पनि यस दिनलाई ‘सुवर–मर्ना’ दिन भनिएको हो । यस दिन बिहानैदेखि भ्यूँरा हालेर रखाएका (रख्वारी) गरेका खोला तथा कुलोहरूमा माछा मार्ने र थारू समुदायका घरमुलीहरू सबै जुटेर सुंगुर मार्ने गरिन्छ ।
यसरी माछा मार्ने, सुंगुर काट्ने र ढिक्री बनाउने काम पुस महिनाको अन्तिम दिन नै गरिन्छ । साँझ परेपछि आफ्ना इष्टमित्र, छिमेकीको घरमा गएर, साथीभाइकहाँ गएर जाँड, सुंगुरको मासु, माछालगायत थारू समुदायमा खाने परिकारहरू खाँदै ढुम्रू भन्ने गीत गाउँदै माघ पर्वको प्रारम्भ हुन्छ ।
ढुम्रुको केही अंश..
उतह लल रे हे कारल सुन्दर मठ कैर सेन्डुरा !
इहे लेव पिहा मोर सेन्डुरा बलैबु र ला ला,
मै सटि हार बलैबु र लाला,
मै सटि हार बलैबु !
माघको दिन नयाँ वर्ष सुरूवात हुँदै छ, एक बर्ष बितेको अवसरमा श्रीमान (पिहा) लाई आफ्नो सिउँदोको सिन्दुर दिने, म सति (माघी) लाई बोलाइदिन्छु भन्ने सन्दर्भमा गाइने ढुम्रूको अंश हो भन्छन्, तुलसीपुर–६ मोतीपुरका थारू बुद्धिजीवि छोटीलाल थारू ।
यस्तै अर्को ढुम्रु (ढमार) को अंश पनि …
हरे उटरक डाँरा चरी हेरो भैया लक्षुमण !
कटहुन बाट लक्षुमण हिउँटा कैर स्वत !
थारू जाति खेती किसानी गर्ने भएकाले हिउँदको समयमा जब पानी पर्दैन अनि कुन डाँडामा चढेर हेरेपछि पानी पर्छ र कहिले पानी पर्ला र हिउँदे बाली (मसुरो, गहुँलगायत) राम्रो होला भन्ने भन्ने सन्दर्भमा गाइने ढमार (ढुम्रु) को अंश रहेको छोटीलाल थारूको भनाई छ ।
यसरी यस्ता खालका ढमार
(ढुम्रु) गाएर माघ पर्व प्रारम्भ हुन्छ । त्यस दिन राति महटवाकोे घरमा गई प्रत्येक घरबाट ठूला–ठूला काठका मूढाहरू लगिएको हुन्छ । त्यसलाई बालेर धुनी जलाइन्छ ।
गाउँभरिका मान्छेहरू जम्मा भई त्यही धुनी ताप्दै मादलको तालमा ढमार (ढुम्रु) गाउँदै, आगो ताप्दै उनीहरू रातभरी जाग्राम बस्ने चलन छ ।
ढमार गीतसँगै माघमा मघौटा गीत र नाच विशेष मानिन्छ । समयसँगै थारू गाउँमा ढमार गाउने चलन पनि लगभक लगभक हराइसकेको छ, जुन थारू ससुदायको लागि साह्रै नै दुःखको कुरा हो । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा थारू समुदायको पहिचान हराउँदै जान्छ र हराउँदै पनि गएको छ ।
यता महिलाहरू भने बिहान भाले बासेसँगै रोटी बनाउन र तरकारीका परिकारहरू बनाउन उठ्छन् भने महटवाको घरमा रातभरी धुनी तापेर जाग्राम बसेका मानिसहरू ढमार गाउँदै, मादल बजाउँदै नदी, कुलो, खोलानाला, घाट, जलसागरमा नुहाउन जान्छन् ।
थारू समुदायलाई प्रकृतिपूजकको रूपमा लिइने हुनाले माघ पर्वमा जलदेवीसँग आफ्ना दुःख, सुख सुनाउने र मागहरू माग्ने गरिन्छ । यसरी मागेका माग पूरा हुने जनविश्वास पनि रहेको छ ।
थारू समुदायमा माघ पर्वमा सबैले अनिवार्य नुहाउनै पर्ने चलन रहेको छ । जाडोका कारण कतिपय मानिसहरू लामो समय नुहाएका हँुदैनन् उनीहरूलाई पनि थारू समुदायको नीतिनियमले गर्दा नुहाउनु पर्ने हुन्छ ।
माघमा नुहाउनाले शरीर सफा मात्र नभईकन विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ भन्ने परम्परागत मान्तयता रहेको छ । नुहाउँदा घाउ खटिरालगायतका रोगहरू पनि लाग्न पाउँदैन यो राम्रो पक्ष पनि हो । तर यो पक्ष मात्र नभईकन थारू जातिको संस्कारको रूपमा रहेको छ ।
कोही लामो समयदेखि बिरामी परेको छ या त कुनैै पनि समस्या छ भने यही माघको अवसरमा जलदेवीलाई बाचा (भाकल) राख्ने गर्छन् र स्वइच्छाले भाले, परेवा तथा भेडाको बली दिने गर्छन् ।
जब जलदेवीसँग मागेको मनोइच्छा पनि पूरा भएको महशुस हुन्छ तब ‘मनौटा पुज्ने’ बली दिने गर्छन । यो पनि थारूहरूको आप्mनै पहिचान हो ।
त्यत्तिमात्रै होेइन थारू जातिमा माघको दिनलाई नयाँ कपडा लगाउने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ । वर्षभरि पुराना लुगा लगाए पनि नयाँ वर्षको दिन नयाँ लुगा लगाउन पाए राम्रो हुने थारू समुदायका जानकारहरूले बताउँछन् ।
तिलको आगोको महत्व
त्यसैगरी थारू जातिमा तिलको आगोको पनि छुट्टै महत्व छ । तिलको आगोलाई पवित्र मानिन्छ र १ गतेको दिन अर्थात् माघको दिन तिलको आगो ताप्ने चलन पनि छ । थारू समुदायमा तिल पवित्र चिज हो त्यसको आगो तापेमा मन पनि पवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
तर यस्तो खालको परम्परा आजभोलि समय परिवर्तनसँगै विस्तारै हराउँदै गएका छन् । कि जुन कुरा अहिलेका नयाँ तथा युवा पुस्तालाई सोध्ने हो भने सायद हामीलाई थाहा छैन थारू समुदायको माघको बारेमा भन्छन् ।
सेतो टिकाको महत्व
शान्तिको प्रतीकको रूपमा लिइने सेतो टीका जुन थारू समुदायमा माघको १ गते लगाउने गर्दछन् । जुन टिकालाई थारू समुदायमा महत्वका साथ लिइन्छ । नुहाउन गएको बेलामा नुहाएर गाउँको महतवाको हातबाट टिका लगाएर मात्र घरमा फर्किने प्रचलन छ । सेतो टिकालार्ई चोखो अथवा पवित्र वस्तुको रूपमा पनि लिइन्छ ।
सेतो वस्तुमा कुनैै पनि दाग लाग्यो भने प्रष्ट देखिन्छ । त्यस कारणले सेतो वस्तुको जस्तै पवित्र, स्वच्छ मन होस् भन्ने मान्यता रहेको छ, त्यसैले माघीमा नुहाएर कुनैै पनि किसिमको गलत क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ सपथ खाने पनि गरिन्छ ।
चेलीबेटीका लागि कोसेली (निस्राउ)
स्नान गरेर घर फर्किएपछि छुट्टाछुट्टै ढकियामा राखिएको चामल, उर्दको दाल, नुन एकएक पसर निकाली छुट्टाछुट्टै टपरीमा राखी छोरी चेलीका लागि कोसेली ‘निस्राउ’ निकाल्ने चलन छ ।
जसलाई थारू भाषामा ‘निस्राउ कहर्ना’ भनिन्छ ।चामल, मास (उर्द)को दाल र नुनलगायतको एक प्रकारको कोसेलीलाई निस्राउ भनिन्छ । जुन निस्राउ आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई कोसेलीको रूपमा दिन जाने चलन छ । निस्राउ आफ्नो क्षमता हेरेर केही थप गरेर पनि दिने गरिन्छ ।
निस्राउ निकालेर जन्मदिने आमाबुवालाई ढोग गरेर आशीर्वाद लिने गरिन्छ । आमाबुबा नभएकाहरूले आफ्ना घरमूली वा नजिकको नाता पर्ने ठूला बडाहरूसँग आशीर्वाद लिने गर्दछन् ।
नाताअनुसार सबैजनासँग ढोग आशीर्वाद लिदै खानपिन पनि शुरू हुन्छ । माघमा बिशेषगरी अनदीको रोटी, चामलको पिठोबाट बनाइएको लामो आकारको ढिक्री, जाँड, सुंगुरको मासु, मेवाको अचार, आलुको चट्नीलगायतका परिकार बनाएर खाईन्छ ।
यसरी यस दिनभरी नै गाउँमा यसैगरी नाताअनुसार आफ्ना मान्यजनबाट सेवा–ढोग गर्दै आशीर्वाद लिदैं स्वतन्त्र भएर माघ मान्ने गरिन्छ । यसले गर्दा समुदायमा एकता, सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन, आपसी सहयोग र सद्भाव आदानप्रदान गर्र्नेमा सहयोग पनि गर्दछ ।
यसरी एकआपसमा सेवासलाम लागेर अंकमाल गर्दा मेलमिलाप तथा सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ, त्यसैले माघ पर्वलाई थारू समुदायमा मेलमिलापको रूपमा पनि लिइन्छ ।
यसैदिन साना–साना बालबालिका– देखि युवायुवती, बृद्धबृदाहरू पनि निकै रमाइलो गर्दै माघ मनाउने गर्छन् । उमेर अनुसारका समूह बनाई घर–घरमा गएर जाँड, सुंगुरको मासु खाएर, ढिक्री मागेर ‘माघ माने अ‍ैली’ भन्दै कराउँछन्, खान्छन्, रमाउँछन्, एकअर्काका रमाइला–रमाइला कुराहरू गर्ने गर्दछन् ।
यता घरका मुली महिलाले ती बालबालिका–हरूलाई ढिक्री, रोटीलगायत त्यस दिनमा बनाईएका परिकारहरू खान दिने गर्छिन् र उनीहरू खाएर खुशी हुँदै उफ्रिदै बिदाई भएर अर्को घरमा माघ मान्न जान्छन् । योे क्रम पनि दिनभरी चल्छ ।
थारू समुदायका थारू युवायुवतीहरू माघ आउनुभन्दा पहिलेदेखि मघौटा गीत गाउँदै नाचेर रमाइलोे गर्छन् । दाङमा मघौटा नाच भनेर एकदमै उत्साहका साथ नाचिन्छ ।
नाचमा नाच्ने नचन्या तथा नर्तकीले चोली (चोल्या),लहङ्गा, सट्की (नाच्दा प्रयोग गरिने कपडा) र थारू गहनामा सजिएका हुन्छन् । मादले महिला तथा पुरूष जो पनि हुनसक्छ । मादलेले मादलमा लगाइएको डोरी कम्मरमा बाँधेर मादल बजाउँछन् ।
गीत गाउनेहरू गीत गाउँदै झाली, कस्टार बजाउँदै रमाइलो गर्छन् । नाचमा महिला पुरूष सबैको उत्तिकै सहभागिता रहेको हुन्छ । यसरी प्रत्येक घर–घरमा नाँच्दै, अनदीको झोल (जाँड) पिउदै थारूहरू रमाउँछन्, जसलाई थारू भाषामा ‘माघ मन्ना’ भनिन्छ । यो क्रम थारू जातिमा पाँच दिनसम्म निरन्तर चल्छ ।
मघौटा गीतको केही अंश…
‘सखी ए हो ! माघक पिली गुरी गुरी जाँर सखिय हो !
भौजी भौजी कहनु भौजी नाही बोलली रे हाँ …
सखिए हो ! भौजीक कारण बाबा छोरनु डुवार सखिए हो !
‘भाउजू–भाउजू भने तर पनि भाउजू बोल्नु भइन बाबा म भाउजूकै कारण घरको ढोका छोडेँ ए सखी’ भन्ने जस्ता आफ्ना सुख दुःखका गीतहरू माघमा गाइन्छ ।
मुक्ति दिवसको रूपमा माघ
यस पर्वमा आफूले काम गर्ने कुनै पनि अफिस, हलिया, मुक्त कमैयाहरू अथवा रैती या अन्य व्यक्तिहरू केही समयको लागि छुट्टी पाएका हुन्छन् र घरमा बसेर धुमधामका साथ आपसमा रमाइलो गरेर माघ पर्व मनाउने गर्दछन् ।
यसरी कामबाट मुक्त भएर अथवा स्वतन्त्र रूपमा मनाइने भएकोले यसलाई थारू समुदायमा मुक्ति दिवसको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । माघमा सबैजना स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थारू समुदायमा रहेको छ,
त्यसैले मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा माघ मनाए जस्तै पहिले–पहिले घरमा पालिएका पशुहरू (भेंडा–बाख्रा, गाई–गोरू, राँगा–भैंसी, सुंगुर) लाई पनि छाडा छाडिन्थे र कसैको बाली नोक्सानी गरे पनि त्यस दिन आममाफी हुन्थ्यो तर समय परिवर्तन भएसँगै योे चलन अहिले परिवर्तन भएको छ ।
पहिले जे जस्तो भए पनि आजभोलि यसरी छाडा छोड्दा नोक्सान बढी हुने भएकोले रोक लगाइएको थारू अगुवाहरूको भनाई रहेकोे छ । माघ १ गते यस्तो दिन हो की जुन थारू समुदायका मान्छेहरूले माछा मासु पकाउने र मार्ने कार्य पनि गर्दैनन् ।
माघ १ गतेको दिनलाई थारू समुदायमा नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने हुनाले नयाँ बर्षको दिनमा गलत क्रियाकलापहरू नगर्ने र गलत क्रियाकलाप गरेमा पछि कुनै पनि कुरामा असर पुग्छ त्यसले यस दिनमा मासुको तरकारीसमेत नपकाउने चलन रहेको छ ।
बली दिने होस् या त खानपिनको लागि होस् माघको १ गतेका दिन कुनै पनि पशुपंक्षीको काटमार हुँदैन । त्यसकारण पुषको अन्तिम दिन नै पकाएर राख्ने र दुई दिनसम्म त्यही खाने गरेको थारू बुद्धिजीविहरू बताउँछन् ।
किनभने यस दिनमा कसैलाई अन्याय, अत्याचार गर्नुहुँदैन, कसैलाई नरामे व्यवहार गर्नुहुँदैन, कसैलाई आँच आउने काम गर्नुहुँदैन, कुनै पशुपंक्षीका ज्यान मार्नु हँुदैन भन्ने मान्यताका कारणले माछा मासु पकाउने र मार्ने कार्य नगरिएको हो ।
थारू समुदायमा खिचडी पकाएर खाने दिनलाई ‘खिच्रहवा’ भनिएको हो । थारू समुदायले खिचडी पनि माघमा खाने गर्दछन् । खिचडी मासको दाल, चामल, नुन, बेसार, घ्यू तथा तेलमा पकाइन्छ ।
खिचडी जस्तैः जमिन्दार, रैती, किसान, कमैया, ओर्गिनियाँ (महिला अगुवा), छेग्रहवा (बाख्रा चराउने मान्छे), बर्डिवा (गोरू चराउने मान्छे), भैंसर्वा (भैंसी चराउने मान्छे) सबै एकै ठाउँ बसेर छलफलमा सहभागी हुने र समान व्यवहार गरिने भएकोले पनि ‘खिच्रहवा’ भनिएको पुराना पुस्ताका थारूहरूको भनाइ छ । यस दिन कसैले कसैलाई पदीय रूपमा विभेद गर्न पाउँदैनन् । सबैजना स्वतन्त्र रूपमा दिल खोलेर बोल्न बोल्छन् यसर्थ पनि थारू जातिमा माघ पर्वको महत्व धेरै नै छ ।
वर्षभरिको समीक्षाको रूपमा माघ घरभित्रको आन्तरिक छलफल पुसको अन्तिम दिन भएपनि वर्षभरिको कामको समीक्षा गर्ने, पुनः जिम्मेवारी लिन–दिने भने माघी दिवानीको दिन गरिने थारू अगुवाहरूले बताउँछन् ।
महतवालाई मान्न जानेलाई माघ दिवानी भनिन्छ । माघ दिवानी गाउँको महटवाको घरमा माटोको भाँडो (करै) मा रक्सी लिएर प्रत्येक घरको घरमूली माघ दिवानी मनाउन जाने गरिन्छ जुन चलन कुनै–कुनै गाउँमा आजभोलि हराइसकेको छ भने कतै निरन्ता दिइएको पनि देखिन्छ ।
योजना निर्माण गर्ने दिनको रूपमा माघ
यस्तै गरी माघमा ‘भुराखेल’ तथा ‘ख्याल’ बैठक पनि बसिन्छ । भुराखेल भनेको गाउँभरिका किसान, जमिन्दार, रैतीहरूको बृहत् भेला हो । भेलामा एक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ र भेला गाउँको अगुवाको घरमा हुन्छ ।
आगामी वर्षको लागि गाउँका अगुवा पनि चुनिने भएकोले विशेष महत्व मानिन्छ । अगुवालाई ठाउँ विशेष अनुसार बरघर, भल्मन्सा, महतवा भनिन्छ ।
अगुवा चुनिएपछि कुलापानी हेर्ने अघरिया (अगाडिको मान्छे), पन्हेर्वा (पानी हेर्ने मान्छे), गाउँको भूह्याँर थानको हेरचाहका लागि र गाउँको रक्षक (चौकीदार) पनि चयन गरिन्छ ।
बैठकमा गत वर्षमा भए गरिएका बाटोघाटो, कुलानाला, सडकलगायत विकासको कामसम्बन्धी समीक्षा हुन्छ । नयाँ नीति नियम निर्माण गर्ने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना पनि तोकिन्छ ।
यस्तैगरी परिवारको व्यक्ति कुन कामको जिम्मा लिने, उमेर पुगेकाहरूको विवाह गर्ने र नगर्ने, ‘छारा’ (बसाईसराई) सरेर जाने र नजाने, घर छुट्टिने र नछुट्टिने,
अधिया–बटैया लिनेदिने, वर्षभरिको काम गर्दा मनमुटाव भए त्यसैबेला छलफल गरी सहमतिमा ल्याउने, कसैसँगको लेनदेन, हिसाब किताब लगायतका घरायसी कुराहरूको गम्भीर छलफल गरी पुनः एक वर्षको लागि जिम्मेवारी लिनेदिने काम पनि माघमा हुन्छ ।
तर आजभोलि यस्तो गरिदैन किन भने यी सबै समयको परिवर्तनसँगै आप्mनो मौलिक परम्परा, पहिचान र संस्कार भुल्नु नै यसको प्रमुख कारण मानिन्छ ।
थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने माघ पर्वको मौलिक परम्परा समाजमा भएको परिवर्तनसँगै आजभोलि लोभ हुन थालेको छ । जसलाई हामीले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने हो ।
यसरी थारू समुदायमा अगुवा चुन्ने, नीति निर्माण गरिने, आगामी योजनाको छनौट गर्नेे भएकोले गाउँलाई पनि अनुशासित बनाउँछ र नियममा रहन सहयोग पनि गर्छ, त्यसैले यसलाई जोगाउन अत्यन्त जरूरी छ । यसलाई बचाउन सकियो भने गाउँघरमा परम्पराभन्दा पनि समृद्ध संस्कृति र समाजको विकास गर्न सहज हुन्छ ।
हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुक हो । यहाँका विभिन्न जातजातिहरूको आफ्नै मौलिक परम्परा, भाषा, कला र संस्कृति अनुसार चाडपर्वहरू रहेका छन् । त्यसैगरी आफ्नै किसिमका लवाई–खवाई र चालचलन पनि रहेका छन् ।
यसरी विभिन्न जातजाति, कला र संस्कृतिले हामीलाई नेपाली बनाएको छ । एकअर्काको कला, संस्कृतिलाई स्वीकार्नु र सँगसँगै रमाउनु हामी नेपालीको विशेषता होे । यसरी समुदायमा एक आपसमा सद्भाव बढाउन र एकअर्कामा सहकार्य गर्नको लागि पनि थारू जातिमा माघ पर्वको महत्व रहेको छ ।